Olona iray no maty, maro no naratra tamin'ny fipoahana fiara fitateram-bahoaka any Ouganda
Home » Lahatsoratra farany farany » Birao fizahantany afrikanina » Olona iray no maty, maro no naratra tamin'ny fipoahana fiara fitateram-bahoaka any Ouganda
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Crime • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao Mafana Oganda
Olona iray no maty, maro no naratra tamin'ny fipoahana fiara fitateram-bahoaka any Ouganda.
Roa andro monja taorian'ny daroka baomba nahafaty olona iray no nitrangan'ilay fipoahana fiara fitateram-bahoaka izay nahafaty olona iray sy nandratra olona telo tao amin'ny toeram-pisakafoanana amoron-dalana iray tao an-drenivohitra Kampala ny asabotsy teo, izay nantsoin'ny polisy ho “hetsika fampihorohoroana an-trano”.
Fipoahana ny fiara fitateram-bahoaka akaikin'i Kampala nahafaty olona iray ary nandratra olona maromaro.
Ny fanafihan'ny fiara fitateram-bahoaka dia nanaraka ny daroka baomba nahafaty olona tao Kampala, nambaran'ny ISIL (ISIS), izay nahafaty ny iray ary nandratra telo.
Manao fanadihadiana momba ny fipoahana fiara fitateram-bahoaka tao Lungala ireo manam-pahaizana manokana momba ny baomba Ogandey.
Nanambara ny polisy Ogandey fa olona iray no maty ary olona maromaro no naratra tamin'ny fipoahana fiara fitateram-bahoaka teo akaikin'ny renivohitry ny firenena. Kampala.
Nisy fipoahana nahafaty olona tao anaty fiara fitateram-bahoaka an’ny orinasa Swift Safaris nitranga androany, tokony ho tamin’ny 5 ora hariva tany an-toerana.
Olona telo no niditra tao amin’ilay toeram-pisakafoanana nandrahoana henan-kisoa ary namela harona plastika nisy tao anatiny izay nipoaka avy eo.
Tsy mbola nisy fisamborana ny polisy.
Nitonona ho tompon'antoka tamin'ny fanafihana tao Kampala ny vondrona ISIL (ISIS).
Nalefa tany amin'ny toerana fanapoahana baomba tao Lungala ireo manam-pahaizana manokana momba ny baomba Ogandey mba hanadihady ilay fipoahana.
Lungala dia eo amin'ny 35km (22 miles) any andrefan'i Kampala, amin'ny iray amin'ireo lalana be olona indrindra ao amin'ny firenena, mampitohy an'i Ogandà amin'i Tanzania, Rwanda, Burundi ary ny Repoblika Demokratikan'i Congo.
Araka ny filazan'ny mpitondra tenin'ny polisy dia efa voahidy ny toerana misy azy mandra-piandry ny tombana sy ny fanadihadiana lalina ataon'ireo manam-pahaizana momba ny baomba, ary hanome vaovao tsindraindray ny polisy momba ny zava-nitranga.
Namoaka fanitsiana ihany koa ny polisy Ogandey nilaza fa olona iray no namoy ny ainy tamin’ilay fanafihana, taorian’ny filazana teo aloha fa olona roa no maty.
Ny filoha Ogandey Yoweri Museveni tao amin'ny bitsika iray dia nilaza fa mbola mitohy ny “fikatsahana” ireo nahavanon-doza ary “mazava sy be dia be ny fanoroana”.